आज सुनको भाउ कती ? – दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौं । आज नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ । आज सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज तेजावी सुन ७१ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको महासंघले जनाएको छ।
भने तेजावी सुन आइतबार ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । भने आज चाँदीको भाउ ओरालो लागेको छ । आइतबार ८ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदिको मुल्य आज घटेर ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
भाइरल जोडीको घरमा पर्यो यस्तो च#र्का च#र्की, सम्पतिको लागि बिबाह गरेको हो त ? रहस्य त यस्तो पो रहेछ